कोरोनाको नक्कली रिपोर्ट दिने ल्याब सञ्चालक नै छानबिन समिति सदस्य - समय-समाचार
समय-समाचार शनिबार, २०७७ मंसीर ६ गते, ०५:५६ मा प्रकाशित
काठमाडाैं । विदेश जाने यात्रुलाई कोरोनाको नक्कली रिपोर्ट दिने अस्पताल तथा ल्याबमाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिमा ल्याब सञ्चालकलाई नै विज्ञ समूहमा राखेको पाइएको छ ।
बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विदेश जाने यात्रुलाई नक्कली कोरोना रिपोर्ट दिने अस्पताल र ल्याबबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । नेपाल एयरलाइन्समार्फत विदेश पुगेका यात्रुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि काठमाण्डु उपत्यकाका चार वटा अस्पताल र ल्याबहरुले कोरोनाको नक्कली रिपोर्ट दिएको खुलेको थियो ।
नक्कली रिपोर्ट दिएको भनिएकाहरुमा ह्याम्स अस्पताल, स्टार अस्पताल, सूर्या हेल्थ केयर र डिकोड ल्याब रहेका छन् । उक्त समितिमा डाक्टर मुकुन्द शर्मा, डा. अमृत पोखरेल र बलराम गौतम सदस्य छन् ।
ती अस्पताल र ल्याबहरुले विदेश जाने यात्रुहरुलाई नक्कली रिपोर्ट दिने गरेको पाइएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
नेपालमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएका यात्रुहरुमा विदेशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विभिन्न देशमा नेपाल एयरलाइन्सको उडान रोकिएको छ । हङकङ, युएईसहित केही देशमा उडान रोकिएपछि नेपाल एयरलाइन्सले सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेकालाई मात्र उडान अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
को हुन समितिमा रहेका ल्याब सञ्चालक ?
छानबिन समितिमा डिकोड ल्याबका सञ्चालक बलराम गौतम रहेका छन् । उनलाई मन्त्रालयले नक्कली रिपोर्ट दिए÷नदिएको विषयमा छानबिन गर्न उक्त समितिमा नियुक्त गरेको हो । गौतमको ल्याबले नै कोरोनाको नक्कली रिपोर्ट दिने गरेको तथ्य स्वंय नेपाल वायुसेवा निगम र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
वीर अस्पतालमा ल्याब टेक्निसियनको रुपमा गौतम करारमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । उनले देशभरका सरकारी ल्याब सेटअप गर्ने भन्दै बिना प्रतिष्पर्धा लाइभ साइन्स नामक कम्पनीबाट ल्याबमा बिक्री गरेका थिए । एक लाखमा पाउने अटोकेल्भ पाँच लाखमा पोखरा ल्याबमा विक्री गरेपछि उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ ।